Sunday, 29 Sep, 2019 9:14 AM
अलेक्जेण्डर विश्वविजय गर्दै स्वदेश फर्किंदै गर्दा पुरानो घाउ बल्झिन थाल्यो । वैद्यसँग भने– ‘सायद, मेरो अन्त्यकाल आयो तर म मर्न चाहन्नँ । त्यसैले तिमी यस्तो उपाय खोज, जसबाट अजम्बरी हुन सकूँ ।’ वैद्यले कुनै झर्नाको नाम लिएर त्यसको पानी पिउन सल्लाह दियो । अलेक्जेण्डर तुरुन्तै त्यो झर्नामा पुगेर पानी पिउन झुकेका मात्र के थिए, एउटा वृद्धले रोक्दै भन्यो– ‘आजभन्दा तीन हजार वर्षअघि मैले पनि तिमीले जस्तै धेरै देशमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाएको थिएँ । अनि अन्त्यमा बाँच्ने भोक जाग्दा यसै झर्नाको पानी पिएर मृत्युविजयी समेत भएँ । तर समय बित्दै जाँदा म बूढो र कमजोर भएपछि जितिएका देशहरू मेराविरुद्ध लागे । परिणामस्वरूप जंगल र गुफामा लुकेर ज्यान बचाउन बाध्य भएँ । आज मेरो यस्तो दुर्दशा भएको छ, जुन देश जितें, त्यो देशका जनता मलाई क्रुर आक्रमणकारी ठानेर थुक्छन् ।’ सुस्केरा हालेर बुढाले थप्यो– ‘अब पनि तिमी यो पानी पिएर अमरत्व प्राप्तिको मोह राख्छौ भने पिऊ, अघाउञ्जेल पिऊ ।’
अलेक्जेण्डर यस्तो अमरत्व आपूmलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै वृद्धलाई धन्यवाद दिएर फर्किए ।
संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो उपचारमा संलग्न देशी–विदेशी चिकित्सकलाई पदक दिलाउनु भएको छ । उहाँलाई लाग्दो हो– ‘आफू कुर्सीमा छँदा गरिने सम्पूर्ण कर्म संविधानका धाराबाट निःसृत हुन्छन् । शक्तिमा हुँदा आँखाबाट झरेका आँशु फेरि आँखैमा लगेर भर्ने अनौठो प्लम्बरको काम पनि गर्न सकिन्छ ।’ तर त्यसो होइन । मुलुक समृद्धमा लैजान हजुरबा, छोरा र नाति तीनपुस्ताको हित हेरेर काम गरिदिए पूर्ण हुन्छ । समाजवाद, साम्यवाद, माओवाद सबै छोडेर प्रत्येक नेपालीको चुलोमा दानापानीको सरल अर्थशास्त्र घुसाइदिए हुन्छ । किताब कण्ठ गरेर पुस्तौं पुस्तालाई थाङ्नामा सुताउने यो पहिलो पुस्ता हुँदै होइन । दुनियाँ हेरेर पनि केही सिक्नुपर्छ । नरेन्द्र मोदी, सि जिनपिङ, डोनाल्ड ट्रम्प, भ्लादिमिर पुटिन नेपाली नेतासँग कुम जोडेर सेल्फी हान्न मात्र जन्मिएका होइनन् । तिनीहरूको हरेक चाल देश हितमा छ । विश्वको ‘प्राणवायु’ बन्ने होडमा उनीहरू प्रतिस्पर्धी छन् । यदि अरूलाई थर्काउन र फुईं लडाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पदको उपयोग भयो भने अहिलेका ठूला मान्छे त परै जाओस् , तिनीहरूले कामको उच्च मूल्यांकन गरेर पदक भिरेकाहरूको भविष्य पनि अन्धकारमा जाकिन सक्छ । किनकि त्यो पदक नभएर ‘टिप्स’ हो । टिप्स दिनकै लागि सत्ताको उपयोग गर्ने हो भने दीर्घायुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तीन घण्टा मात्र सुत्छन् भन्ने थाहा पाएपछि आपूm अल्छे भएको महसूस गरेका डोनाल्ड ट्रम्प सुरुवालमा चिटिक्क परेर हिँड्ने रहर व्यक्त गर्छन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा हिन्दूहरूका भगवान् हनुमानको प्रतापप्रति अगाध आदरभाव मात्र राख्दैनन्, बरु भन्छन्– ‘पूर्वीयहरूको संस्कार र संस्कृतिबाट पश्चिमाहरूले सिक्नुपर्छ ।’ त्यही अमेरिकाले केही वर्षअघि मोदीलाई आतंककारी करार ग¥यो । राष्ट्रपति भएका बखत ओबामाले मोदीलाई घरमै भात खान निम्तो दिए । नवरात्रिको ब्रत बसेका मोदीले यस अवधिमा पानीबाहेक केही नखाने भनेर भात अस्वीकार गरे । मोदीको कडा ब्रतबाट प्रभावित ओबामाले आपूm पनि पानीको भरमा ब्रत बस्न इच्छुक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सुविख्यात वैज्ञानिक अब्दुल जे. कलाम भारतको राष्ट्रपति भए । मुसलमान समुदायका उनको सितारमा रामधून बजाएर प्रातःकालीन दैनिकी शुरु हुन्थ्यो । सम्पत्तिका नाममा किताब, किताब अनि फेरि किताब मात्र जोडे । व्यक्तिगत नाममा आएका सम्पूर्ण उपहार राज्यलाई सुम्पिए । आफूले सुविधामा पाएका राष्ट्रपति भवनका दर्जनौं कोठाहरू ओगटेनन्, बरु दुईवटा कोठामा सीमित गरी सादगी जीवनको उत्कर्ष नमूना पेश गरे । संसारमा पद हैन, मान्छे इमान्दार हुने हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सिले ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने कम्युनिष्ट हुन सक्दैन’ भनेर नेपालका कम्युनिष्टहरूको धज्जी उडाइदिए । उनी संसारलाई आर्थिक विकासको चिनियाँ मालाले जोड्न चाहन्छन् ।
मन, ओठ वा मनमस्तिष्क केबाट मान्छेको विचार निःसृत हुन्छ, उसको धरातल पनि त्यसैबाट निर्धारित हुन्छ । बोलीमा इमान्दारी र काँधमा जिम्मेवारी लिएको मानिसका लागि वर्तमान सर्वश्व हो । न उ अनिश्चित भविष्यको वायुपंखी घोडामा रमाउँछ, न विगतको विषाद सम्झिएर पश्चातापको पोखरीमा पौडी खेल्छ । बरु महाभारतका पात्र अर्जुनजस्तै रुखको हाँगामा झुण्डयाइएको चराको आँखा मात्र देख्छ र लक्ष्यप्राप्तिमा अघि बढ्छ । यस्ता मानिसले एण्डरसनको जस्तो आयु थप्न भौंतारिनु पर्दैन । न त यस्ता मानिसले स्वर्गको ढोका खोल्न जीवनको अन्त्य नै पर्खिनुपर्छ ।
नेता कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसको सपाट उत्तर संसारको कुनै पनि विधि तथा शास्त्रले दिन नसक्ला । तर व्यक्तित्वको निर्माण हुन ऊभित्रको मानव धर्मको दियो कहिल्यै निभ्नु हुन्न भन्नेमा दुईमत छैन । संसारमा कसैले नयाँ गर्ने होइन । नयाँ माटो आविष्कार गरेर खेती गर्ने होइन । भगवान् शिवलाई खुशी पारेर हिमालय पर्वतबाट हिमचट्टान फोरी पानी झार्ने होइन । हिन्दी फिल्मको हिरो भैंm असम्भव पुरुषार्थ देखाउने पनि होइन । काम गर्नु भनेको इमान्दारीको संस्थागत विकास हो । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा जनतालाई कम गुनासोको अवसर दिनु नै सुशासन हो । दुःख कहिले पो थिएन ? चोरी, हत्या, बलात्कार, दुराचार, पापाचारका घटना भर्खर शुरु भएका हुन् र ? होइन, सृष्टिको शुरुवातबाटै मानिस यस्ता कुकर्मबाट प्रताडित छ । मानव प्रयास यस्ता कुकृत्य न्यून बनाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । गाई परापूर्वकालदेखि नै घाँस खान्थ्यो । बाघ अहिले आएर मांसाहारी भएको होइन । लामखुट्टे, उडुस, उपियाँलाई मान्छेले तालिम दिएर रगत चुसी भाग्न सिकाएको होइन । मान्छेले बाँदरलाई भन्ने त्यही चकचके स्वभावका कारण प्राकृतिक चक्र चलेको छ । जहाँ बाँदरले चाहिनेभन्दा बढी तुलपूmल झार्छ, त्यो खान मृग हाजिर हुन्छ । जहाँ मृग आफ्नो पेट भर्न आउँछ, तब ऊ पत्तै नपाई चितुवाको आहार भइसकेको हुन्छ । हात्ती स्वभावतः भीमकाय हुन्छ । ऊ हिँड्दा मात्रै लाखौं साना जीवजन्तु मरिरहेका हुन्छन् । अब कमिला, पानीमुनिका माछा, गँड्यौला, फट्यांग्राको नाश हुन्छ भनेर हात्तीले दैनिकी ठप्प ग¥यो भने के हुन्छ ?
जीवनको रहस्य के हो ? यस्ता प्रश्नहरूको चाङ बोकेर मानिस सृष्टिदेखि अहिलेसम्म अविराम यात्रा गरिरहेको छ । तर हजारौं, लाखौं झुठको पहरा, पर्खाल नाघेर पनि उसले चित्तबुझ्दो सत्यमा सीमित हुन सकेको छैन । स्वच्छ, सीधा र साँचो कसले बोल्ने ? आत्मैदेखि बोल्ने अभ्यासमा हामी कति पारंगत छौं ? आफ्नै हात छातीमा राखेर धर्म भाक्नुस् त– सत्विवेकको नाममा, नीति धर्मको नाममा, जीवन जीविकाको बाध्यतामा अनि राजनीतिको खालमा अन्तरआत्माको आवाजलाई कति धोका दिनुभयो ?
जान्नलाई मानिस रातदिन अध्ययन गर्छ । गाँठिएका सयौं गुजुल्टा फुकाउँछ । तर जति गुजुल्टा फुक्छन् अनि झन् कसिला गाँठाहरूको प्रवेश बढ्दै जान्छ । त्यही गुजुल्टोको फेद टुप्पो खोज्दाखोज्दै जीवनको काया फेरिन्छ । ९० वर्षको बाबु अंशमा किचलो परेपछि आपूmले जन्माएको ७० वर्षको छोरालाई धारेहात पारेर भन्छ– ‘तँलाई बल्ल चिनें, तँ त शकुनी र कुलद्रोही रहिछस् । यस्तो जानेको भए त गर्भमै निमोठिदिन्थें ।’ आफ्नै रगतको डल्लालाई ७० वर्षसम्म नचिन्ने बाबु कस्तो होला ? तर आश्चर्यको विषय होइन, पाषाण युगदेखि आधुनिक युग भनिएको यो समयसम्म आइपुग्दा पनि मान्छे चिन्ने नाममा मान्छे झुक्किँदै आएको छ ।
धनी–गरिब दुवैको समान कल्याण गर्छु भन्ने महात्मा गान्धी, अब्राहम लिंकनजस्ता पात्रहरूले आखिर गोलीको उपहारबाट जीवन लीला समाप्त गर्नुप¥यो । पहिला पहिला जति बढी श्रीमती भित्र्याउन सक्यो, ऊ बढी खानदानीमा दरिन्थ्यो । अहिले त्यसो गर्नेहरू पुलिसको गेष्टहाउसमा पाहुना हुनुपर्छ । एक जमानामा चुरोट खानेहरू समाजका लब्धप्रतिष्ठित ठहर्थे तर अहिले त्यही चुरोट सल्काउनेहरू चुरोट तानेको एक घण्टासम्म पनि सामाजिक भेलामा घुलमिल हुन हच्किन्छन् । मुलुकी ऐनलाई पनि पुरेतले पढ्ने कर्मकाण्डी पुस्तकजस्तो जसो भन्यो त्यसै स्वाहा गर्नाले आज कानुनको अपव्याख्याका कारण कति निर्दोषहरूको जीवन बर्बाद भइरहेको छ ? यसतर्पm कसैको दृष्टि पुगेको छैन ।
अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई सधैं नालायक देख्छ रे ! तर सत्य के हो भने नयाँ पुस्ता जतिसुकै नाकाम भएपनि समयचाहिँ उसैको हो । मानिसलाई बुढ्यौली लागेपछि ऊसँग रहेको वस्तु भनेको फगतः अनुभव र अनुभूति मात्र हो । कसैको अंकुशविना सफल कर्म सम्भव छैन । मानिसका जीवनमा दुःख सुख त सिक्काको गाई र त्रिशुल हो । थालको भात दुःख हो भने अचार सुख हो । कोही त्यही अचारको भरमा भात मीठो मानेर बुत्याउँछन् त कोही अचार रित्याएर भातरूपी दुःखको पसल खोलेर बस्छन् । सुख र दुःखको प्रारब्ध दृष्टिकोणबाट शुरु हुन्छ । मृत्युका अगाडि आपूm मात्र एक्लो ठिंग उभिन्छु भन्ने सोच नै दुःखको खाडल खन्ने औजार हो ।